Saturday May 18, 2019 - 08:01:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hay'adda Hormuud Foundation ayaa maanta Deeq Rashiin gar gaar ah u qeybiyay Qaar ka mid ah Qoysaska Dadka laga tira badan yahay ee ku dhaqan Magaaladda Muqdisho iyo Daafaheeda.
Deeqdan oo ka Kooban Bur, Bariis, Sonkor, Baasto, Salliid & Timir ayaa Hay’adda Hormuud Telcom Foundation waxay Magaaladda Muqdisho ugu qeybisay in ka badan 250 Qoys oo ka mid ah Qoysaska ka soo jeeda Dadka laga tira badan yahay.
Qeybinta Deeqdan ayaa Loogu talagalay in Qoysaskan ay u kaashadaan Gudashada Waajibaadka Bisha Barakeysan ee Ramadan.
Qaar ka Mid ah Dadka la Siiyay Deqdan oo ka mahad Celiyay Madaxda Shirkadda Hormuud iyagoo qeybinta deeqdana ay ku tilmaameen mid lagu soo beegay xiliga loo baahnaa.
Tan iyo Markii la guda galay Bisha Ramadaan Hey’adda Hormuud Telcome Foundation ayaa waxay sidan oo kale u Qeybisay Deeqo isugu jira Raashiin iyo Lacag loogu talagalay in lagu Caawiyo Dadka u baahan.